संक्रमित ३ दिनकी सुत्केरीलाई जनप्रतिनिधिले नै घरवाट ल’खे’टेर अस्पताल पठाए, अस्पतालले भर्ना लिएन – Dainik Sangalo
संक्रमित ३ दिनकी सुत्केरीलाई जनप्रतिनिधिले नै घरवाट ल’खे’टेर अस्पताल पठाए, अस्पतालले भर्ना लिएन
August 30, 2020 252
काठमाडौ । रामेछापबाट मध्यपुरथिमि नगरपालिका–९ बोडे कृषि विकास बैंकको तालिम भवन नजिकै जग्गा भाडामा लिएर जस्ताको सानो दुईवटा टहरा बस्दै आएर एक श्रेष्ठ परिवारका पुरुषलाई यही भदौ ४ गते कोरोना पुष्टि भयो। सानो दुईवटा टहरामा बस्दै आएका १४ जनाको परिवार , एउटै भान्छा र शौचालयको प्रयोग अन्ततः परिवारकै कोरोना फैलने कारक बन्न पुग्यो।
सामान ओसारपसारको व्यवसाय गर्दै आएका ती पुरुषमा भदौ ४ मा कोरोना पुष्टि भएपछि पाटन अस्पतालमा उपचाररत छन्। भदौ ७ मा नागरिक अस्पतालमा अन्य पाँच जनाको पीसीआर परीक्षण गरियो। उनीहरुको रिपोर्ट पनि पोजेटिभ आयो।
भदौ ७ मा निजामती अस्पतालमा भर्ना भएकी संक्रमितकी छोरी ८ गते सुत्केरी भइन् र ९ गते डिस्चार्ज भइन्। बुबालाई कोरोना भएर पाटन अस्पताल लगेपछि सोही अस्पतालमा रु पाँच हजार ५०० तिरेर उनले पनि १० गते पीसीआर परीक्षण गरिन्। ११ गते सुत्केरीमा पनि कोरोना देखियो। परिवारका अन्य १० जनाको पनि वडा कार्यालयको समन्वयमा ९ गते नेपाल कोरिया नगरपालिका मैत्री अस्पतालमा पीसीआर गरियो। अन्ततः परिवारका सबैमा कोरोना देखियो।
उनीहरुलाई कहाँ जाने र के गर्नेको अवस्थामा पु¥यायो। ‘बुबालाई शुरुमा कोरोनासँग मिल्ने लक्षण देखियो। साधारण रुघा, ज्वरो होला भनेर घरमै बसियो, कम नभएपछि कोरोना परीक्षण गराउँदा तीन दिनमा रिपोर्ट आयो। लक्षण देखेर रिपोर्ट आउने बेलासम्ममा घरमा बसेको एक साता भइसकेको थियो। त्यसपछि बल्ल उहाँलाई उपचारका लागि पाटन अस्पताल लगियो,’ परिवारका एक सदस्य भने।
जनस्वास्थ्य कार्यालयले घरमै बस्नु कहीँ नजानु भनेपछि परिवार सबै घरमै बसेका थिए। संक्रमित एउटै टहरामा परिवारसँगै बस्दा साँघुरो कोठा, एउटै भान्छा, एउटै शौचालयबाटै परिवारका अन्य सदस्यमा पनि कोरोना भएको अनुमान जिल्ला स्वस्थ्य कार्यालयको छ ।
एकबाट १४ जनामा कोरोना फैलिनु त्यो परिवारका लागि निकै क;ष्टकर समय थियो। चार दिन र तीन महिनाका दुई सुत्केरी, ७, ८ र ११ वर्षका तीन बालबालिका, ७५ वर्षका एक वृद्धासहित उनीहरुको परिवारलाई न दिनमा भोक, न रातमा निद्राझैँ भएको बेलामा अर्को आपत्ति आइलाग्यो।
वडाध्यक्षसहितको जनप्रतिनिधि र स्थानीय केही व्यक्तिले टोलमा फैलिन सक्छ भन्दै प्रहरीकै अगाडि घर छाड्न दबाब दिन थालेको बताइएको छ। ‘एकातिर जनस्वास्थ्य कार्यालयले घर नछाड्नु अन्त पठाउन सकिन्न भन्छ, अर्कोतर्फ स्थानीय घर छाडेर उपचारमा जाओ भन्छन्, उपचार गर्न कसलाई मन हुँदैन र ? अब के गर्ने ? कहाँ जाने ? त्यही बेलामा वडाध्यक्षले बोलाएको भन्दै १०२ को एम्बुलेन्स आएपछि सबैले दबाब दिए, हामी बाध्य भएर एम्बुलेन्स चढ्यौँ’, परिवारकी एक महिलाले भनिन्।
एम्बुलेन्स विद्युत् प्राधिकरणको खरिपाटीस्थित आइसोलेसनमा पुगेर बच्चासहितको परिवार ओर्लियो। यसपछि स्वाथ्यकर्मीलाई तनाव भयो। भक्तपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा सुमित्रा गौतमले यस्तो विपद्मा बच्चा बोकेर सुत्केरी आइसोलेसनमा आउनु पी’डा’दायक भएको बताउँदै सुत्केरीलाई स्याहार नहुने भएकाले घरमै फर्काउन माथिल्लो निकायसम्मलाई भन्नुपरेको बताइन्।
स्वास्थ्यकर्मीले घर फर्किन भनेपछि संक्रमितका परिवार झन् पीडामा पुगे। गाउँले घर नबस भन्छन्, आइसोलेसनका स्वास्थ्यकर्मी यहाँ नबस भन्छन्, अब जाने कहाँ, महिला, बालक र ज्येष्ठ नागरिकको मनमा निकै पी’डा भयो। अन्ततः शुक्रबार राति ९ बजे पुनः एम्बुलेन्समा राखेर सबै परिवारलाई बोडेस्थित टहरामै फर्काइयो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले सङ्क्रमितलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा स्थानीयवासीले नै घर छोड्न दबाब दिएको थाहा पाएपछि तत्काल प्रहरीलाई उनीहरुको घरमै बस्ने व्यवस्था मिलाउन र अवरोध गर्नेलाई कारबाही गर्न भनेपछि राति उनीहरुलाई फर्काइएको जानकारी दिइन्। उनले विपद्मा एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्नेमा अपहेलना गर्नु कानूनविपरीत रहेको जनाउँदै मानिसमा मानवता हराउँदै गएको आभाष भएको बताइन्। बोडेका संक्रमित परिवारलाई अहिले वडाध्यक्षसहितका केही स्थानीयवासीले खाद्यान्नलगायतका सामग्री सहयोग गरेको र उनीहरुलाई भित्रै बस्न भनिएको छ।
मध्यपुरथिमि नगरपालिका–९ का अध्यक्ष रामकाजी चक्रधरले जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीको गलत नियत नभएको दाबी गरे। उनले भने, ‘सुत्केरी र बालबालिका भएकाले एउटै टहरामा एउटै भान्छा, एउटै शौचालयले थप समस्या पार्न सक्छ भनेर आइसोलेसनमा पठाउने व्यवस्था गरेका हौँ, तर नि का ल्यो भनेर हल्ला गरेछन्, अहिले हामीले नै उनीहरुलाई सहयोग गरिरहेका छौँ।’
भक्तपुरको बोडेमा तीनभन्दा बढी परिवार, लोकन्थली, गठ्ठाघर, बालकोट, पाण्डुबजार, कटुञ्जे, सूर्यविनायक, सिपाडोल, मध्यपुरथिमि, बागेश्वरीलगायतका क्षेत्रमा परिवारमा फैलिएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख मिजारले जानकारी दिए। उनका अनुसार संक्रमित परिवार होम आइसोलेसनमा बसेको जनाउँदै यसरी बस्नेको एउटै भान्छा र शौचालय प्रयोग गर्दा परिवारमा फैलिएको पाइएको उनको भनाइ छ।
Prevसाउदीका राजाले भने-कामदारको तलब रोक्नेलाई सरकारी भुक्तानी नदेऊ स्वदेश फर्किन चाहने कामदारलाई फर्काउने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ!!
Nextनन्द र भाउजु दुबैजना लाई पालैपालो करणी गर्ने यी हुन् पुजारी बाबा
बाइडेनलाई बधाई नदिने रुसले अमेरिकालाई बजायो खतराको घण्टी, समुन्द्रमा देखियो डरलाग्दो दृष्य